हटियाको तल्लो लमाईका चार जन्न विपन्न परिवारलाई जस्ता पाता बितरण ! – ebaglung.com
हटियाको तल्लो लमाईका चार जन्न विपन्न परिवारलाई जस्ता पाता बितरण !
२०७४ चैत्र १९, सोमबार २०:४६	Top News, थप समाचार
घनश्याम गौतम गल्कोट २०७४ चैत १९ । गल्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा खरको छानो मुनि बसोबास गदैं आएका बिपन्न परिबारलाई जस्ताको पाता बितरण गरिएको छ ।
गल्कोट नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ अन्तरगत वडा नम्बर ३ मा स्थाई रुपमा बसोबास गर्ने खरको छानो बिस्थापन गर्नको लागी रु ३ लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट अनुसार आज गल्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ को तल्लो लमाईमा बसोबास गर्ने ४ परिबारको लागी जस्ता पाता बितरण गरिएको हो ।
गल्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ को कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बिच जस्ता बितरण गर्दैं बडा अध्यक्ष वीरजंग भण्डारीले यस वडा भित्रका सबै घरमा खरको छानो बिस्थापन गर्ने अभियान सुरु भएको बताए । वडाध्यक्ष भण्डारीले यस वडा भित्र बसोबास गर्ने करिब २२ घर धुरीमा खरको छानो रहेकोले उक्त घरमा अब जस्ताको पाताको ब्यबस्था गर्न अनुदान दिइएृको बताए । उनले जस्ताको पाता प्राप्त गर्ने सबैलाई जस्ताको सही तबरण सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । भण्डारीले जस्ता पाता वडा भित्रका बिभिन्न टोलबाट बितरण गरिने जानकारी पनि दिए ।
आज गल्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ को तल्लो लमाईका चम्फादेखी अधिकारीलाई ८ फिटको १२ ओटा, टेक बहादुर नेपालीलाई ९ फिटको २२ ओटा, तुल बहादुर नेपालीलाई ९ फिटको २० ओटा र बाबुराम नेपालीकोलागी ८ फिटको १६ ओटा जस्ता पाता बितरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा गल्कोट नगरपालिका बड ३ का जनप्रतिनिधी, पत्रकार स्थानिय लगाएतको सहभागिता रहेको थियो । बिशेष गरि खरको छानो दिगो नहु्ने, हरेक बर्ष पुननिर्माण गर्नुपर्ने, आगालागीको उच्च जोखीम हुने भएकोले जस्ताको पाता अनुदानमा उपलब्ध गराइएको बडा कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम बडा सचिब आनन्द प्रसाद शर्माले सञ्चालन गरेका थिए ।
१४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै धौलागिरीस्तरीय सहकारी युवा सम्मेलन सम्पन्न !
गल्कोट नगरपालिका वडाहरुमा बामपन्थी महिला संगठन गठन अभियान जारी !